पदम बडाल ,????????
२०७६ कार्तिक २५ सोमबार ०६:२३:००
पदम बडाल, ????????
नेपाली भूमि कालापानी मात्र होइन, गुन्जी र नावीढाङमा पनि भारतीय फौजका आठ क्याम्प छन् । तर, कालापानीभन्दा तल टिंकरको छ्यालेकमा नेपाल प्रहरीको सानो चौकी मात्र छ । जाडो थाम्न नसकेर त्यहाँका प्रहरी छाङरु झरिसकेका छन् । अझ जाडो बढेपछि उनीहरू ५१ किमि तल दुम्लिङ झर्नेछन् । यसरी सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नै शून्य छ ।
भारतको व्यापार प्रतिनिधिसमेत बस्ने गुँजी क्षेत्रमा एसएसबी, कुमाउँ स्काउटको भारतीय सेना र सिख बटालियन तैनाथ छन् । कालापानीमा आइटिबिपी (इन्डियन तिबेतियन बोर्डर पुलिस), एसएसबी र भारतीय सेनाका दुई गुल्म छन् । कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ नाबिढाङमा आइटिबिपी र भारतीय सेनाको एक गुल्म तैनाथ छन् ।
धार्चुलातर्फबाट कालापानी क्षेत्रको प्रवेशद्वार छियालेक (भारततर्फ) मा हेलिप्याडसहितको कुमाउ स्काउटको भारतीय सैनिकको गुल्म र एसएसबीको क्याम्प छ । छियालेकबाट तीन किलोमिटर उत्तरतिर पर्ने गब्र्याङमा आइटिबिपी र एसएसबीको क्याम्प छ । छियालेकबाट उत्तरतिर कालापानीसम्म भारतीय सैनिकले नियमित गस्ती गर्छन् । पछिल्लोपटक ५ कात्तिकमा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल आइएस घुमानले यो क्षेत्र भ्रमण गरेका थिए । नेपालतिरबाट पाकिस्तानी आतंककारीहरूको घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै एक महिनादेखि सीमाक्षेत्रमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूको संख्या बढाइएको छ । भारतीय सैनिक क्याम्पमा सामान बोक्ने भरियाहरू छियालेकमा सैनिक संख्या थपिएको बताउँछन् ।
धार्चुलादेखि कालापानीसम्म भारतले सुरक्षा उपस्थिति झन् शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ । धार्चुलामा प्यारा बटालियनसहित कुमाउ स्काउटको भारतीय सेना, गोर्खा रेजिमेन्टका साथै एसएसबीको टुकडी छ । धार्चुलामै बख्तरबन्द गाडीको ग्यारेजदेखि मर्मतसम्भार केन्द्रसमेत छ ।
धार्चुलाबाट एक किलोमिटर दक्षिणतिर एमआई १७ हेलिकोप्टर उत्रिन सक्ने हवाईमैदान छ । सो क्षेत्रमा दैनिक हवाईसैनिक गस्ती गरिरहन्छ । त्यस्तै, धार्चुलाबाट उत्तरतिर दोबाट, एलागाड, तावाघाट र पाङ्ला गरी चार स्थानमा एसएसबीका क्याम्प छन् । पाङ्लाभन्दा उत्तरतिर घट्टेबगरमा एसएसबी, आइटिबिपी र कुमाउ स्काउटको क्याम्प छ । गर्बाधार र मालपा क्षेत्रमा एसएसबीको क्याम्प राखेको छ । मालपाको उत्तरतिर लामरीमा एसएसबी, आइटिबिपी र कुमाउ स्काउट तैनाथ छन् भने बुदीमा एसएसबी क्याम्प छ । धार्चुलामा थप हतियारसमेत भण्डार गरेको छ ।
भारतले धार्चुलादेखि चीनको सीमा लिपुपाससम्म ९४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये २७ किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्छ । गुँजी–कालापानी आठ किलोमिटर, कालापानी–नाबिढाङ १० किलोमिटर र नाबिढाङ–लिपुपास ९ किलोमिटर पर्छ ।
सीमा सुरक्षा पोस्ट अलपत्र
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउने बताउँदै आएका छन् । दार्चुलास्थित सीमाक्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बिओपी) राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको ६ महिना बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । २० वैशाख ०७६ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको रिपोर्टसहित प्रतिवेदन दिने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिठी लेखेको भए पनि गृह मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेले बताए ।
तस्बिर : शंकर धामी
#कालापानी # भारतीय फौज # आठ क्याम्प